Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda West Ham… +SAWIRRO – Gool FM
Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda West Ham… +SAWIRRO
(London) 22 Dis 2020. Chelsea ayaa garoonkeeda Stamford Bridge guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda West Ham, kaddib markii ay kaga adkaatay 3-0, xilli ciyaartan ay qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Chelsea.
Daqiiqadii 10-aad kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-0 ka dhigay daafacooda Thiago Silva, kaddib markii uu ka faa’ideystay kubad gees ka laad ah uu soo tuuray Mason Mount.
Daqiiqadii 78-aad kooxda Chelsea ayaa dhalisay gool labaad, waxaana 2-0 ka dhigay Tammy Abraham, kaddib markii uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Timo Werner.
80 daqiiqo marka ay dheeshu mareysay Blues ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta, waxaana markale 3-0 ka dhigay Tammy Abraham.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay 3-0 oo ay Chelsea kaga adkaatay kooxda West Ham United oo marti ugu aheyd garoonka Stamford Bridge, Blues ayaa haatan fadhisa booska 5-aad ee dhanka miiska kala sareynta horyaalka Ingiriiska.